ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: ရင်လွမ်းချိန်
စပါယ်တွေ အပြိုင်းအရိုင်းပွင့်လို့ ကောင်မလေးရဲ့။
လရောင်တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်တဲ့ အဲ့ဒီည
ခရေတမွှေးစာပဲဝေးခဲ့ပါတယ် ။ ။
(ချစ်ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်ပါ သူငယ်ချင်းခံစားချက်ကို ရင်မိတ္တူကူးယူပါသည်)
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 8:50 AM
ဆောင်းယွန်းလ, January 29, 2010 at 11:12 AM
very good poem, bro.
I like it. I think you will win lottery.
kiki, January 29, 2010 at 11:25 AM
ဆိုတာ ဘယ်လိုလည်း ၊
ဘာတွေကျင့်ပြီး ဘာတွေကြံတာပါလည်း ။
ရှင်းလင်းပြစေချင်ပါသည် ကိုချစ်ဖေ ။။
(မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ လွမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည် ..လေ )
ကိုချစ်ဖေ, January 29, 2010 at 12:20 PM
ညက အမြဲတမ်း ညသဘာဝအရ မှောင်သလေလေပေါ့
ကိုချစ်ဖေက ကြားကနေ ၀င်ဖြေတာပါ အချစ်တွေဘာတွေ သိလို့ရယ်လဲ ဟုတ်ပါဘူး..ဒေါ်ကိရယ်....လွတ်လပ်စွာ လွမ်းချင်လဲလွမ်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် လွမ်းချင်လဲလွမ်းဗျား.......
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, January 29, 2010 at 3:42 PM
ချစ်ကြည်အေး, January 29, 2010 at 3:50 PM
အဲဒီ အပိုဒ်လေး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတယ်....
ရီမိုးပြည့် , January 30, 2010 at 1:08 AM
ကဗျာဦး, January 31, 2010 at 6:24 AM
မြန်မာစာ မြန်မာစကား, February 1, 2010 at 4:32 AM
ကဗျာလေး ကောင်းတယ် အကိုရေ..
မောင်မောင်, February 5, 2010 at 8:51 AM
ကိုချစ်ဖေ ထံသို့ အလည်လာခဲ့ပါသည်။
ကိုကျောက် ထံမှာတွေ့ ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကဗျာလေး လည်း ဖတ်သွားသလို စာလဲ ဖမ်း ( အဲ ဖတ်သွားပါသည်။)
ဂျူနို, February 7, 2010 at 5:08 AM
ခရေ တမွှေးစာ တဲ့ လား စကားလုံးက မိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ကိုချစ်ဖေ လူတကာ တမိန်ချွတ်၍ လွတ် ပြိုင်နေကြတာ အားကျပြီး ပေါက်ကရ ပြိုင်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ မချစ်ကြည်အေးက အားလုံးကို ဇောက်ထိုး လိုက်ကြည့်နေတယ်။ ရှက်ရှက်:))